“Haddii aynaan ku guuleysan Champions League, waxaan noqon doonnaa kuwo fashilan sida shantii sano ee la soo dhaafay” – De Bruyne – Gool FM
(Manchester) 24 Feb 2020. Xiddiga kooxda kubadda cagta Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa sheegay in dadku ay u tixgelin doonaan naadiga Sky blue mid fashalintay haddii ay ku guuldarreysato hanashada tartanka Champions League xilli ciyaareedkan.
Manchester City ayaa ku wajihi doonta wareega 16-ka tartanka Champions League kooxda reer Spain ee Real Madrid habeenka Arbacada ee soo aadan.
In kasta oo ay Manchester City ku guuleysatay koobab badan maxali ah ee gudaha dalka England xilli ciyaareedkii hore, haddana Sky blue ayaa waxay ku fashilantay hanashada tartanka Champions League.
Haddaba Kevin De Bruyne ayaa kahor kulnka ay habeenka Arbacada kula ciyaari doonaan Real Madrid tartanka Champions League wuxuu sheegay:
“Haddii aan ku guuleysan weyno tartanka UEFA Champions League, qof walba wuxuu sheegi doonaa inaan nahay kuwo fashilan, sida 5-tii sano ee la soo dhaafay”.
“Waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan ku guuleysano wax walba, laakiin mararka qaar, koox kale ayaa fiicnaaneysa, ama si fiican shaqo u qabaneysa, sida ay Liverpool xilli ciyaareedkan sameeysay”.
“Way iska cadahay in Real Madrid ay tahay kooxdii ku guuleysatay koobabka ugu badan tartanka Champions League, laakiin waxaan u maleynayaa inaan halkaas u aadi doono si aan u ciyaarno kubaddeena caadiga ah, sida aan had iyo jeer sameyno, oo aan isku dayno inaan sameyno qaab ciyaareed weerar ku saleysan, waxaan isku dayeynaa inaan cadaadis saarno, waxaan isku dayeynaa inaan ciyaarno ciyaar fiican, haddii aan awoodnana aan guuleysano”.